The real reason why Owen Ncube dropped out of Zanu PF Midlands chairmanship race revealed | My Zimbabwe News
Home News The real reason why Owen Ncube dropped out of Zanu PF Midlands...
The real reason why Owen Ncube dropped out of Zanu PF Midlands chairmanship race revealed
PRESIDENT Emmerson Mnangagwa recently threatened to fire State Security minister Owen Mudha Ncube following his involvement in devastating factional battles currently ravaging Zanu PF, highly placed sources in the ruling party said.
The sources said Mnangagwa summoned Mudha to a meeting where he strongly chastised him for his role in the ongoing rumpus. Mnangagwa also warned Mudha that unless he renounces his bid for the party provincial chairmanship, he would be left with no option but fire him from the lucrative ministerial job.
And, as reported by NewZimbabwe Friday, Mudha opted to retain the ministerial job and bowed out of the race, preferring instead to throw his weight behind another claimant, Edson Chiherenge Chakanyuka.
Previous articleZanu PF bigwig Patrick Chinamasa left severely traumatised as fire burns down his Borrowdale house
Next articleDouglas Mwonzora’s MDC-T speaks on joining POLAD, hints on forming GNU with Mnangagwa’s Zanu PF